တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KOPPU အတွက် အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း KOPPU အတွက် အနီရောင်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်
September 15, 2009 — mmweather
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားသည့် KOPPU အတွက်
အနီရောင်အဆင့် သတိပေးချက်ကို TSR မှ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
နိုင်ငံအဆင့် – အနီရောင်သတိပေးချက်
မုန်တိုင်းအဆင့် CAT1 နှင့်အထက် ၉ဝ%
မုန်တိုင်းအဆင့် TS (အပူပိုင်းမုန်တိုင်း) ၁ဝဝ%
မုန်တိုင်းအဆင့် CAT1 နှင့်အထက် ၃၅%
မြို့များ – အဝါရောင်အဆင့် သတိပေးချက်
ဟောင်ကောင် – အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ၁ဝဝ%
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E) – အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း ၉ဝ%
Maoming (21.9 N, 110.9 E) – အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း ၆ဝ%
အနီရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် – အင်အားပြင်း – CAT1 အဆင့်ဖြင့် ၃၅% မှ ၁ဝဝ% အထိ သေချာမှုရှိလျှင် ထုတ်ပြန်ပါသည်။
အဝါရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် – အင်အားပြင်း – CAT1 အဆင့်ဖြင့် ၁ဝ% မှ ၃၅% အထိ သေချာမှုရှိလျှင် ထုတ်ပြန်ပါသည်။
CAT1 မုန်တိုင်းအဆင့်ဆိုသည်မှာ – လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၇၄ မိုင်နှုန်း(၁၁၉ ကီလိုမီတာ)နှင့် အထက်(သို့မဟုတ်) လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၆၄မိုင်နှုန်းဖြင့် တစ်မိနစ်ထက်ပိုကြာအောင်ဆက်တိုက်တိုက်ခတ်လျှင် CAT-1 အဆင့် မုန်တိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။
ယခုသတင်းတင်ချိန်တွင် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်
Typhoon KOPPU is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
probability for CAT 1 or above is 90% currently
Hong Kong (22.4 N, 114.2 E)
Guangzhou (23.1 N, 113.3 E)
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: KOPPU, tropical-storm, typhoon, weather. LeaveaComment »
« အပူပိုင်းမုန်တိုင်း KOPPU ဟောင်ကောင်-မကာအိုအနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လိမ့်မည်
အပြင်းထန်ဆုံး အဆင့်-၅ သို့ ရောက်ရှိမည့် မုန်တိုင်း CHOI-WAN »